Haweneeydii ugu horeeysay oo muslim ah oo ku biiratay aqalka senate-ka ee dalka Australia – Madal Furan
Hoy > Warka > Haweneeydii ugu horeeysay oo muslim ah oo ku biiratay aqalka senate-ka ee dalka Australia
Haweneeydii ugu horeeysay oo muslim ah oo ku biiratay aqalka senate-ka ee dalka Australia
Editor August 15, 2018 0
Madal Furan – Mehreen Faruqi ayaa noqotay haweeneydii ugu horeeysay oo Muslim ah oo ku biirto aqalka senet-ka ee dalkaasi Australia, iyadoo uu wadanka maalmahaan la daalaa dhacay midab takoor ba’an.
Ms Faruqi,oo ku dhalatay dalka Pakistan ayaa BBC-da u sheegtay in mustaqbalka Australia uu kusii xoogeysanayo dadka kala duwan ee ku wada nool dalkaasi.
Mehreen Faruq ayaa loo doortay senetarka cusub ee koonfurta Wales iyada oo mateleysa xisbiga Greens maalintii arbacada si ay u buuxiso kursigaasi oo banaannaa.
Arrintaan ayaa imaaneysa xili senetar kale oo cusub oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Austaralia uu wajahayo dhaleeceen xooggan kaddib markii uu ku baaqayay in xal kama dambeys ah laga gaaro arrimaha socdaalka.
Ms Faruqi, oo xilkeedan cusub loo dhaarin doono toddobaadka dambe, ayaa ka mid ahayd dadkii caan ahaa oo aadka u dhaleeceeyay xildhibaan Fraser Anning oo isticmaalay erayo midab takoor ah.
Dr Faruqi ayaa Pakistan ka soo haajirtay sandakii 1992 iyada iyo canug yar oo qoyskeeda ah. Waxa ay saaxada siyaadda ku biirtay iyadoo jaamaacadda ku soo baratay deegaanka, kaas oo aad uga duwan siyaasadda.
Waxaa 2013-kii loo dooratay xildhibaanad, taas oo ka dhigtay in ay noqoto haweeneydii ugu horeeysay oo muslim ah oo ku biirto baarlamaanka dalkaasi Australia.
Waxa ay BBC-da u sheegtay in jagadeedan cusub ee senetarka ah ay ku dhisi doonta mustaqbalka Australia.
Khudbadeedii ugu dambeesay ee ay ka jeedisay baarlmaanka ayay diiradda ku saartay hadallada nacaybka ah iyo midab takoorka.
Ms Faruqi ayaa sheegtay in ay ku faraxsantahay in ay aqalka senetka uu noqdo goob ay dad kala duwan isugu yimaadaan. Waxa ayna rajeeyneeysa in ku soo biiristeeda ay dhiira galin doonto dadka aaan cadaan ahayn.
Mucaaradka DFS iyo madaxda Maamul goboleedyada oo lagu martiqaaday caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Puntland.
Cabdi Maxamuud Cumar oo maanta maxkamad la hor geynayo mar kale
Ciidamada AMISOM oo qarax lala beegsaday iyo dad ay iyagu laayeen